Culimada Puntland maxaysan uga hadlin amnidarada oo ku saladay kahortagga fanka? (waraysi) – Radio Daljir
Febraayo 5, 2019 4:17 g 0
Welwelka Puntland maalmahaan ma uusan yareyn. Ammaandarada Bossaso ayana waxa ay gaartay heer madaxii shirkadda PO & Ports ee maareynta Dekedda Bossaso lagu dhex dilo dekedda. Daacish iyo Al-shabaab waxay ku dagaalamayaan daafaha Bossaso. nindoorkii Puntland ee reer Bossaso wuu ka cararay Bossaso ama guri buu isku xiray. Taliyihii Qaybta Bossaso waa Xildhibaan Puntland welina isma uu casalin.
Saas oo xaal yahay maalmahan culimada Puntland waxa ay aad uga hadleen bandhig-faneed ay qabatay fanaanadda Xalimo Gobaad, kuna qabatay magaalada Garoowe. Bandhig faneedkaas ayaaba dadka reer Garoowe qaarkood waxa ay qirayaan in uu ammaanka Garoowe aad uga qaybqaatay oo habeenkaas lagaba raystay ciyaalkii dhaca moobilada shaqadoodu ahayd.
Culimada ayaa shacabku waxa ay ku eedeynayaan in ay inta badan dhaliilaan fannaaniinta, siiba gabdhaha fannaaniinta ah, laakiin aysan ka hadlin falalka amnidarro ee Puntland, siiba Bossaso iyo Gaalkacyo. Waxaanba jirin oo xataa joogsaday khudbooyinka Jimcaha ee ammaanka lagu dhiirigalin jiray, argagixisanada looga horimaan jiray.
Waxaan sidoo kale marnaba aysan culimada Puntland ka hadlin gabadha Mariah Carey oo bandhig faneed kii abidan ugu weynaa ku qabatay Sacuudi Carabia iyo labada masjid ee barakaysan.
Xaawo Axmed Maxamed ayaa s’aalahaas weydiisey Shiikh Maxamuud Xaaji Yuusuf oo ah Guddoomiyaha Jaamacada Bariga Afrika, faraceeda Garoowe.